Faallo: Maxaa horyaala guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir? - Caasimada Online
Home Warar Faallo: Maxaa horyaala guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir?
Faallo: Maxaa horyaala guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir?
Waxaa xusid mudan, in guddoomiye Yariisoow uu u baahan yahay taageero iyo inay gacansiiyaan shacabka Soomaaliyeed ee caasimadda ku dhaqan iyo weliba dawladda dhexe. Waxaa kale oo loo baahan yahay in mudanuhu xusho dad karti iyo aqoon leh oo kala shaqeeya arrimaha faraha badan ee culus oo hor yaalla…Waxaan u rajaynayaa Guul iyo Waxqabad Waara.